silicone မွေ့ယာဆိုတာဘာလဲ မင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား - သတင်းများ - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > သတင်း > စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်
silicone မွေ့ယာဆိုတာဘာလဲ မင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား
လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့အိပ်ရေးကျန်းမာရေးကလည်းပိုပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်။From the previous palm mattress, spring mattress to the current silicone မွေ့ရာ, latex mattress, water mattress and so on. တွေ့ကြရအောင်silicone မွေ့ရာဒီနေ့
silica gelအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိတ်လန့်စုပ်ယူသည်။ဆီလီကွန်သည်သက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလွှတ်သည်။ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ မွေ့ယာပေါ်ရှိစီလီကာဂျယ်လ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖိအားလျော့နည်းစေသည်။ထို့အပြင် silica gel ၏မာကျောမှုနှင့်ပျော့ပျောင်းမှုသည်မတူညီသောအပူချိန်တွင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည် (ပူသည်အအေးနှင့်အအေးသည်ခက်ခဲလာသည်) ။ကိုယ်ထည်တွင်မျဉ်းဖြောင့်ထက်အနည်းငယ်ကွေးသော S-shape ရှိကြောင်းသိရပြီး၎င်းသည်မွေ့ရာနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည့်တင်ပါးများနှင့်အတူအိပ်ပျော်နေပြီးခါးသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကွေးမှုကြောင့်မွေ့ရာမှအနည်းငယ်အကွာအဝေးဖြစ်နေသည်။ တင်ပါးကိုထောက်ခံခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးထိုဒေသရှိဆီလီကွန်ကိုပျော့ပြောင်းစေသည်။The temperature at the waist is lower because ofaslight gap, which makes the silicone here harder. Through this change, the silicone မွေ့ရာ will achieve the effect of sculpting the body curve.
၏အားသာချက်silica ဂျယ်မွေ့ရာis: လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုနှင့်အသင့်တော်ဆုံးအဆင့်သို့အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ဖိအားကိုပြည့်ပြည့် ၀၀ လွှတ်ပေးပါ၊ဆိုးကျိုးမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသာဆီလီကွန်ကိုမွေ့ရာများတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်း၏သက်တမ်းအတိအကျကိုမသိရသေးသော်လည်းဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအရ၎င်းသည်ခုနစ်မှရှစ်နှစ်အထိကြာနိုင်သည်။မွေ့ရာကို ၀ ယ်လိုသည်နှင့်အညီဝယ်ပါ၊ ရွေးပါ၊ ဝယ်ပါ၊ မျက်နှာပြင်ကိုသာမကြည့်ပါနှင့်၊ အထူးအာရုံစိုက်မှုမှာအရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းဖြစ်သည်၊
ကလေးတစ် ဦး သည်မည်သည့်အရွယ်တွင်ခေါင်းအုံးကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်
ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များ - ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောခေါက်ချိတ်များ